I-PDF ku-ePub - Pdf.to
Guqula i-PDF yakho ku-ePub (eBook, i-Kindle)
Hudula bese ulahla ifayela lapha
Sicela uqaphele wonke amafayela asusiwe kusuka kuseva yethu ngemva kwamahora amabili.
Ukudluliswa kwefayela okufakwe nge-HTTPS
Konke ukulayishwa nokulanda kubhalwe ngokubethelwa kokusebenzisa ukubethela kwe-SSL 256-bit. Ngokwenza lokhu, idatha evela kumadokhumenti akho we-PDF kanye ne-ePub ngeke ikwazi ukuthola ukufinyelela okungagunyaziwe.
Phendulela ngokushesha i-PDF ku-ePub
Sineqembu lamarobhothi elinde ngokukhathazeka ukuqala ukuguqulwa. Uma ngengozi baqala ukudlula umgqeni kuqala. Lokhu kuhamba ngokushesha ngoba sinamarobhothi amaningi.
I-EPUB (I-Electronic Publication)
I-standard e-book ekhululekile nevulekile ephuma kwi-International Digital Publishing Forum (i-IDPF), ifomethi evulekile ye-XML yezincwadi nezincwadi zedijithali, ingafundwa kumadivayisi e-ink ephathekayo, amafoni omakhalekhukhwini, namakhompyutha wedeskithophu.
Okufanele ukwenze noma ukuhudula bese uphonsa noma chofoza isibuko esibucayi esikhulu ukuze ukhethe ifayela ofuna ukuguqulwa. Ngemuva kwalokho izinyathelo zethu ze-software zingene futhi zenze ukuphakamisa okunzima.
Iyahambisana nama-Platform amakhulu
Ngoba senza ukuguqulwa kwefayela lethu ku-inthanethi, noma njengoba abanye abantu bebiza ifu. Isofthiwe yethu isebenza kunoma iziphi iziphequluli ezingakwazi ukulayisha le website bese zifunda lokhu.
Ukusekela kutholakale kalula
Ungasithumela i-imeyili ku-hello@pdf.to nganoma yisiphi inkinga ehlobene nokusekelwa
Indlela yokuguqula i-PDF kufayela le-ePub (eBook, i-Kindle) ku-intanethi
1. Ukuguqula i-PDF, donsela bese uphonsa noma chofoza indawo yethu yokulayisha ukuze ulayishe ifayela
2. Ifayela lakho lizoya emgqeni
3. Ithuluzi lethu lizoguqula ngokuzenzakalelayo i-PDF yakho efayeleni le-ePub
4. Bese uchofoza isixhumanisi sokulanda kufayili ukuze ulondoloze i-ePub kwikhompyutha yakho
Linganisa leli thuluzi
4.9/5 - 6 amavoti
63,313 ukuguqulwa kusukela ngo-2019!
Inqubomgomo yobumfihlo - Imigomo Yesevisi - hello@pdf.to
Yenziwe ngu nadermx - © 2019 Pdf.to